Maqaallada Daniel Salikov ee ku saabsan Martech Zone |
Maqaallada by Daniel Salikov
Ha noqoto bilow ama ganacsi dhexdhexaad ah, dhammaan ganacsatadu waxay rajeynayaan inay isticmaalaan xeeladaha suuqgeynta dhijitaalka ah si ay u ballaariyaan iibkooda. Suuqgeynta dhijitaalka ah waxaa ka mid ah hagaajinta mashiinka raadinta, suuqgeynta warbaahinta bulshada, suuqgeynta iimaylka, iwm. Helitaanka macaamiisha suurtagalka ah iyo in la helo booqashooyinka ugu badan ee macaamiisha maalintii waxay kuxirantahay sida aad u suuqgeyso alaabtaada iyo sida loo xayeysiinayo. Xayeysiinta alaabtaadu waxay ku jirtaa qaybta xayaysiinta warbaahinta bulshada. Waxaad qabataa hawlo kala duwan sida